Kuwait Visa | Faka isicelo se-Kuwait eVisa | natvisa.com
Isicelo se-Visa sase-Kuwait kwi-Intanethi
I-Kuwait yazise inkonzo ye-Kuwait Visa ekwi-intanethi yabemi bamanye amazwe abanqwenela ukuhamba baye e-Kuwait. Ukufaka isicelo se-Visa Kuwait kufuna ukuba umntu lowo azalise iinkcukacha ezibalulekileyo ezibandakanya: Ifomu yesicelo sokundwendwela, ikopi yedijithali yencwadana yokundwendwela enikezelwe ukuba ayisebenzi nto ingekho ngaphantsi kweenyanga ezintandathu, kunye nobungqina bobudlelwane bolwalamano. Isatifikethi somvuzo samva nje somxhasi welinye ilizwe siyafuneka ukuba uyasebenza kwicandelo likarhulumente. Ipemethe yokusebenza ukuba ikwicandelo labucala kunye nekopi ye-ID yesazisi somxhasi. Kwimeko yotyelelo lwabakhenkethi olucwangciswe zihotele, ifom yotyikityo lomntu ogunyazisiweyo iya kuqhotyoshelwa. I-Visa isebenza ngokusemthethweni ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-90.
Iindidi ze-Kuwait zeVisa
Abakhenkethi abakhenkethi Imeyli Inyanga ye1 Ukuya kwi-3 yeenyanga enye Faka isicelo ngoku
Xa ufaka isicelo kwi-intanethi ye-visa eya e-Kuwait, kukho inani lamaxwebhu ekufuneka eskenwe kwaye alayishwe. La maxwebhu yi ikopi evavanyiweyo yeenkcukacha zobuqu zencwadana yokundwendwela kunye liphepha lepasipoti. Ukuba umfaki sicelo uvela kwilizwe le-GCC, baya kucelwa ukuba bathumele ikopi efundwayo yekhadi labo lokuhlala le-GCC.
Ukuba nencwadana yokundwendwela esemthethweni iyafuneka kuye wonke umhambi. Ke ngoko, ngelixa ufaka isicelo se-visa eya e-Kuwait kufuneka babe nepasipoti esebenzayo iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu. Ukufumana i-visa eya e-Kuwait kuya kuvumela ukungena kube kanye kwilizwe kwaye umnini-visa angahlala kweli lizwe ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-3 emva kokufika.
Visa eKuwait Visa
Ukuze ungene kwi-Kuwait ngaphandle kwe-hassles, qinisekisa ukuba i-eVisa iprintiwe kwaye umgangatho wokuprinta uphezulu ngokwaneleyo ukuze uxwebhu lufundeke ukuba lifundwe yiarhente yeenqwelo moya, kunye nokufika ngokufika.
Intlawulo yokungena kunye nepasipoti
Nje ukuba abakhenkethi bafike kwisikhululo seenqwelomoya saseKuwait, kufuneka bahlawule umrhumo we-visa we-3KWD.
Abatyeleli kufuneka bahambe baye eKuwait ngencwadana yokundwendwela esetyenziselwa isicelo se-visa se-Intanethi. Ipasipoti kufuneka ibe isemthethweni kangangesithuba seenyanga ezi-6. Iinkcukacha zencwadana yokundwendwela kufuneka zihambelane noxwebhu lwe-visa.
Iinkcukacha ze-Kuwait Visa
Yintoni i-Kuwait eVisa?
Ukufumana i-visa eqhelekileyo kunokuba yinkqubo ende kwaye edinayo. Abantu kufuneka bathumele incwadi yabo yokundwendwela okanye benze idinga lokudibana nabasemagunyeni kwiOmbassy. Ixesha lokulungisa lide kakhulu kwaye liyinkimbinkimbi kwiimeko ezininzi. Ke ngoko, ngokunika abantu indlela elula yokuphuma, urhulumente wase-Namibia waqalisa inkqubo yokugunyazwa kokuhamba nge-elektroniki ngo-2016. Banokufumana intuthuzelo kunye nethuba lokufaka isicelo se-Kuwait eVisa ukusuka nayiphi na ikona yehlabathi. Ixesha lokulungisa lifutshane, ngokukhawuleza kwaye abakhweli bangafumana olu xwebhu lokuhamba ngokulula.
Amanyathelo okufaka isicelo se-Kuwait eVisa
Urhulumente waseKwaiti wazise i-eVisa ukwenza kube lula kubakhenkethi ukuba bafumane i-visa. Ngale nkqubo ye-elektroniki ikhona, abantu akufuneki batyelele kwindlu yozakuzo. Nanga amanyathelo amathathu ekufuneka elandelwe ngabenzi-sicelo ukufaka isicelo se-eVisa ngempumelelo:
Gcwalisa ifomu lesicelo: Okokuqala, kuya kufuneka ugcwalise iphetshana lesicelo ukuqala inkqubo yokwenza isicelo. Khuphela ifom kwaye ugcwalise lonke ulwazi ngokuchanekileyo. Jonga kabini ngaphambi kokuyingenisa, ukunqanda nayiphi na impazamo.
Ungeniso lwamaxwebhu: Kunye nefom yesicelo, kuya kufuneka ukuba ungenise iikopi ezivavanyiweyo zamaxwebhu akho. Jonga ukuba ngawaphi amaxwebhu afunekayo, uskene kuwo kwaye uwafake. Ukucaciswa kwamaxwebhu askeniweyo kunyanzelekile.
Yenza intlawulo: Gcwalisa inkqubo yokucela i-visa ngokuhlawula umrhumo wevisa. Ungasebenzisa ikhadi lakho letyala okanye lokuthenga ukuze ugqibezele le nkqubo. Emva kokuba intlawulo yenziwe ifom yesicelo se-visa iya kuqhutywa.
Ukufika kwabo kwisikhululo seenqwelomoya i-Kuwait, abahambi kufuneka bahlawule isixa esongezelelweyo se-3KD kumagosa okufudukela kwelinye ilizwe. Kuyacetyiswa ukuba kuprintwe i-eVisa, ukuyithumela kumagosa akhoyo. Emva kokuba amaxwebhu abo sele ekhangelwe kwaye ecociwe, iindwendwe ziya kuvunyelwa ukuba zingene kweli lizwe.
Imiyalelo yabafakizicelo Ukufaka isicelo kwi-eVisa e-Kuwait
Ukuba abafaki-zicelo ngabahlali belizwe le-GCC (I-Gulf Cooperation Council) okt, abavela e-Saudi Arabia, e-Bahrain, eQatar, e-United Arab Emirates nase-Oman, kuya kufuneka basebenzise ikhadi labo lokuhlala kwi-GCC ukwenza isicelo se-visa. Ikhadi kufuneka lisebenze ixesha elingangeenyanga ezi-6 okanye ngaphezulu.
Abo baxhomekeke kubantwana, ngabalingane kunye nabasebenzi basekhaya, njl. Njl., Kufuneka bathumele umxhasi (umfaki sicelo ophambili) osasaza ikhadi lokuhlala kwi-GCC ngelixa esenza isicelo se-eVisa. Ukufika kwabo eKuwait, umenzi-sicelo ophambili kufuneka abekho kunye nabantu abaxhomekekileyo.
Ukuba umenzi-sicelo ungumhlali welizwe le-GCC, kufuneka abe evela kwezi zifundo zilandelayo -ugqirha, injineli, umcebisi, igqwetha, ijaji / ilungu lezotshutshiso loluntu, usomashishini, oonondaba nabasebenzi beendaba, utitshala waseyunivesithi, umqhubi wenqwelomoya, umhlalutyi wenkqubo / Inkqubo yeekhompyuter, umphathi, amabutho ozakuzo, isidanga saseyunivesithi- umnini, umphathi kunye nommeli weenkampani zorhwebo kunye namaziko.
Yintoni iVisa yabakhenkethi yaseKuwait?
Abantu abahamba baye eKuwait ngeenjongo zokhenketho kufuneka bafumane uxwebhu lokuhamba, okt i-eVisa, eya kubavumela ukuba bangene kweli lizwe.
Ihlala ixesha elingakanani i-eVisa ye-Kuwait?
Ixesha lokusebenza kweVisa yeKhenketho ye-Kuwait ziinyanga ezintathu, kodwa isenokwahluka ngokuxhomekeka kubuzwe bomenzi-sicelo.
Ngawaphi amaxwebhu ayimfuneko kwinkqubo yesicelo se-eVisa Kuwait?
Amanye amaxwebhu ekufuneka uskene kwaye ugcwalise ngexesha lenkqubo yokwenza isicelo yile- ikopi yeenkcukacha zakho zepaspoti kunye nephepha lokugqibela lepaspoti.
Ngaba ndifuna ukuveza naluphi na uxwebhu xa ndifika eKuwait?
Ewe, ekufikeni kwe-Kuwait, iindwendwe kufuneka zingenise la maxwebhu alandelayo-ipasipoti leyo yayisetyenziselwa isicelo se-Visa kunye ne-eVisa evunyiweyo.
Luphi uxwebhu ekufuneka ndilunika ukubonisa ukuba ndingumhlali weGCC?
Ukuba ungumhlali we-GCC, kuya kufuneka unike ikhadi lakho lokuhlala eGCC. Ikhadi kufuneka lisebenze ixesha elincinci leenyanga ezi-6.
Leliphi inani lamangenelo elivunyelweyo kwi-Kuwait eVisa enye?
Uya kuvunyelwa kuphela ukungena kube kanye nge-Kuwait eVisa.
Yeyiphi imeko ekufanele ukuba ipasipoti yam ihlangane ukuze ifake isicelo se-eVisa e-Kuwait?
Ngaphambi kokuba ufake isicelo se-eVisa yokuya eKuwait, qinisekisa ukuba unayo ipaspoti efanelekileyo esebenzayo isithuba seenyanga ezi-6 okanye ngaphezulu.
Yeyiphi indlela eqhelekileyo yokuhlawula ngerhafu ye-Kuwait yeVisa?
Abahambi kufuneka bahlawule imali yabo yokundwendwela kwindawo yokujonga umda. Banokusebenzisa imali ezinkozo okanye nayiphi na enye indlela efanelekileyo yokuhlawula ukuhlawula isixa se-3Kuwaiti Dirhams, eyimali ye-visa.
Ndingalufumana phi ulwazi malunga nesicelo sam sevisa?
Ndingayifumana phi i-eVisa yam?
Uya kufumana i-visa yakho kwi-ID ye-imeyile oyichazileyo ngelixa ufaka isicelo sevisa yakho.
Ngaba lukhona naluphi na uxwebhu ekufuneka ndiluphethe xa ndifika eKuwait?
Ewe, kufuneka unikeze ipasipoti yakho eyayisetyenziselwa ukufaka i-visa kunye ne-eVisa evunyiweyo, kubaphathi besikhululo seenqwelomoya.